Huawei Mate 8, famakafakana ny phablet tsara indrindra eny an-tsena | Androidsis
Ny fitomboana miharihary amin'ny Huawei eo amin'ny tsenan'ny telefaona. Roa taona lasa izay dia nanamboatra ny Samsung sy Apple ny mpanamboatra aziatika ary raha mitohy amin'ity taham-pahavitrihana ity dia tsy ho ela vao ho tonga eo. Roa herinandro lasa izay dia nasehoko anao ny fahatsapako voalohany tamin'ny Huawei P9, terminal iray izay namela fahatsapana tena tsara ho ahy ary hamoaka fanadihadiana feno ato ho ato aho. Fa anjaran'ny tsirairay izao Huawei Mate 8.
Ary nandritra ny andiany farany an'ny CES an'ny Las Vegas Huawei gaga tamin'ny nanolorany phablet misy efijery 6-inch. Izao dia entiko ianao a Huawei Mate 8 famerenana, telefaona miavaka amin'ny famaranana kalitao sy ny fizakantenany lehibe.
1 Volavola mitohy miaraka amin'ny famaranana premium
3 Pikantsary izay mamirapiratra amin'ny hazavany manokana
4 Huawei Mate 8, fahaleovan-tena tsy mbola nisy toa azy
5 Fakan-tsary miavaka
5.1 Sary ohatra nalaina niaraka tamin'ny Huawei Mate 8
8 Isa manohana
9 Hevitra manohitra
9.2 Galerie sary an'ny Huawei Mate 8
Volavola mitohy miaraka amin'ny famaranana premium
Hanomboka amin'ny firesahana momba azy aho Huawei Mate 8 famolavolana. Mazava ho azy, voalohany dia tiako ny manasongadina ny Unboxing mahafinaritra an'ity telefaona ity. Huawei dia nikarakara ny antsipiriany rehetra, miaraka amin'ny boaty premium izay misy, ankoatry ny telefaona sy tariby izay mahazatra antsika, headphone tsara kalitao, mpiaro lamba ary fonony. Ny satroko dia miala amin'ity lafiny ity.
Raha ny volavolan'ny fonosana dia karakaraina hatramin'ny antsipiriany farany, azonao atao an-tsaina fa miankina amin'ny lahasa ilay telefaona. Ary ny ankizilahy no miankina amin'ny lahasa! Ny famolavolana dia manaraka ny fitohizan'ny mpanamboatra, izay mahatratra fiteny famoronana fantarina: ny Mate 8 dia ekena ho Huawei avy hatrany.
Ho hitanao fa misy fahasamihafana vitsivitsy momba ny Mate 7 na ny Mate S amin'ny famolavolana. Eny, misy andinindininy tiako io: ny lamosin'ny Huawei Mate 8 milahatra amin'ny tsipika boribory, manalavitra ny volavola teo aloha miaraka amin'ireo singa noforonina miorina amin'ny kianja, ary manome endrika tsy manam-paharoa.
Ary ahoana ny famaranana azy. Ny fitaovana fanamboarana ny vatana ny Mate 8, alimo sy vy vita amin'ny sandbasted, manome endrika tsy manam-paharoa ny terminal. Ireo famaranana ireo dia miparitaka eraky ny fitaovana, manafina ireo tsipika plastika tsy mahazo aina ho an'ireo antennas izay nahazatra ny maodely hafa. Eo anoloana dia natolotr'izy ireo ny rafitra 2.5D, miitatra hatrany amin'ny finday vaovao an'ny mpanamboatra, izay mamorona làlana eo amin'ilay faritra. ny efijery izay mahatratra ny sisiny.
Tiako manokana ny toe-javatra misy ny sensor sensor: Hitako fa ahazoana aina kokoa any aoriana noho ny any aloha ny filan'ny mpanamboatra hafa, na dia miankina amin'ny tsiro an'ny mpampiasa tsirairay aza izany.
Ny ilany ankavanana dia eo no hahitantsika ny bokotra on / off an'ny terminal ankoatry ny bokotra fanaraha-maso. ny mafy ny fanamboarana, araky ny telefaona, ny fanomezana fikitika tena mahafinaritra ary ny fahasarotana kely amin'ny bokotra herinaratra dia manampy antsika hanavaka nefa tsy mijery izay bokotra tsindrio. Toy ny mahazatra, Huawei dia mitandrina ny antsipiriany rehetra.
Izaho manokana dia tena miahy ny famaranana amin'ny telefaona ary amin'ny tranga phablet vaovao an'i Huawei dia tena tsara tokoa ny fahatsapana. Azonao atao ny mahita ny asa lehibe nataon'ny mpanamboatra, izay nanolotra a telefaona misy famaranana ambony sy amin'ny haavon'ny haavo avo misy azy.
Su mahatsapa an-tanana dia tsara Ary na eo aza ny famaranana ny metaly dia tsy milamina mora foana ny telefaona. Na dia nisy tranga fiarovana aza dia aleoko nampiasa telefaona tsy misy azy, mba hanomezana fandalinana kendrena bebe kokoa amin'ity lafiny ity ary tena tsara ny fahatsapana: tsy nisy fotoana nahatsapako hoe nivadika avy teny am-pelatanako ilay telefaona. Ary ny ampahany amin'ny fahamendrehana dia mitoetra amin'ny refy.
Satria amin'ity lafiny ity Huawei no nanao peta-kofehy azy. Miatrika telefaona misy efijery enina santimetatra isika nefa toa tsy toa izany eny an-tanana. Ary i Huawei dia nahavita namorona zana-kazo farafahakeliny amin'ny lafiny efatra amin'ny telefaona, ankoatry ny haben'ny hateviny, na eo aza ny efijery lehibe misy azy, dia mahafinaritra sy mora ampiasaina ny telefaona. Teboka miavaka iray hafa dia miaraka amin'ny hazavan'ny terminal, araka ny habeny: 185 grama.
lafiny X X 157.1 80.6 7.9 MG
efijery 6-inch IPS-Neo LCD 1920 × 1080 teboka (367dpi) sy Corning Gorilla Glass 4 sosona
processeur HiSilicon Kirin 950 (core-valo) valo (Cortes-A72 2.3GHz efatra sy Cortex A53 efatra 1.8)
bateria 4.000 mAh tsy azo esorina
vidiny 520 euro amin'ny alàlan'ny Amazon
Efa fantatrao fa ny orinasa aziatika dia mamolavola chipset ho azy ary ho an'ny Huawei Mate 8 dia miloka amin'ny matanjaka izy ireo Kirin 950 SoC, processeur iray noforonin'i HiSilicon, an'ny vondrona Huawei ary manome fampisehoana tena tsara.
Ny teboka nahitana mpikirakira toa ny Kirin 935 hita tao amin'ny Huawei Mate S na ny Honor 7 Izy io dia niaraka tamin'ny fizarana sary, tamin'ny fampidirana ireo GPU efa antitra loatra. Saingy amin'ny tranga Kirin 950 dia toa voavaha io olana io.
Ary i Huawei dia miloka amin'ny mahery ARM Mali-T880 GPU miaraka amin'ny fikirana MP4 anao. Fitaovana sary tsara lavitra kokoa noho ireo teo aloha ary, raha ampifandraisina amin'ny efijery HD feno an'ny Huawei Mate 8, dia manome fahombiazana tena tsara. Araka ny hitanao amin'ny famerenana video, afaka nanandrana kilalao marobe aho ary tsy nanana olana tamin'izany.
ny milamina sy misosa ny lalao, mamela anao hankafy azy ireo tsy misy olana. Satria koa ny Huawei Mate 8 dia tsy mafana loatra aorian'ny fampiasana mafy. Andininy hafa tokony ho raisina.
Ary misaotra ireo coro Cortex-A73 izay manolotra a fanjifana tsara sy fanafanana, Ankoatry ny fiantohana fa tsy hafanana ny telefaona aorian'ny fampiasana mafy azy dia efa nolazaiko taminareo fa ny Huawei Mate 8 dia manana tady mandritra ny fotoana fohy. Ny bateria dia iray amin'ireo tanjakan'ity finday ity. Fa ny momba ny efijery aloha no tiako horesahina.
Pikantsary izay mamirapiratra amin'ny hazavany manokana
Ny faritra Mate Niavaka foana noho ny fanolorana telefaona misy efijery goavambe ary ity tombony ity dia manana tombony sy fatiantoka. Hanombohana azy, tsy azo atao ny mamorona efijery tonga lafatra miaraka amin'ireo refy ireo, na farafaharatsiny miaraka amin'ny vidiny mirary.
Ity no antony lehibe indrindra nifidianan'ny Huawei a LCD tontonana izay mahatratra ny vahaolana Full HD. Ny tsaho voalohany dia nanolo-kevitra fa ny Huawei Mate 8 dia hanana tontonana QHD toa ny Nexus 6P na tontonana AMOLED toa ny Mate S, saingy tsy misy zavatra hafa lavitra ny marina.
Farany ny Huawei Mate 8 dia misafidy tontonana iray misy fiasa mitovy aminy izay niasa tsara teo alohany. Tena te hahita efijery OLED na LCD misy vahaolana tsara kokoa aho, na dia tena nisondrotra be aza ny vidiny ary nihena be ny fizakan-tena.
Amin'ny taratasy dia mazava fa ny hakitroky ny pixel dia tsy ny tsara indrindra, indrindra raha ampitahaintsika amin'ny efijery an'ny Samsung Galaxy S7, na dia efa nolazaiko taminao aza fa noho izany vidiny izany dia tsy hahita telefaona misy efijery tsara kokoa noho ny Huawei ianao. Mate 8.Inona ny efijery an'ny Huawei Mate 8 dia tsy ratsy. Saingy tsy ny tsara indrindra eto an-tsena fotsiny izao.
Andao hiresaka antsipiriany ao amin'ny efijery Huawei Mate 8: hanombohana ny tontonana dia karazana IPS-NEO, ireo antsoina hoe efijery JDI. Sarimihetsika mitovy amin'ilay teo amin'ny Mate 7, na dia nisy aza ny fanatsarana ny antsipiriany sasany, manamboatra ny loko maintso an'ilay maodely teo aloha ary mampitombo be ny famirapiratany (ambonin'ny 490 nits, 522 cd / m²).
Ity famirapiratana ity dia adika amin'ny a fampisehoana mamiratra izay azo zahana tsy misy olana eny ivelany. Amin'ny alàlan'ny fampidinana ny famirapiratana ho faran'izay kely indrindra dia afaka mamaky tsy misy olana amin'ny haizina tanteraka ianao nefa tsy manelingelina ny masonao.
ny maranitra sy marevaka ny loko, manome mazava tsara. Ho fanampin'izany, ny rindrambaiko Huawei dia mamela anao hanitsy ny mari-pana amin'ny loko araka ny tsiron'ny mpampiasa tsirairay. Raha fintinina, efijery tena feno izay mihoatra ny vinavinany, fa tsy tonga amin'ny hatsaran'ny fàfana AMOLED. Na dia mahita ny fizakan-tenany aza dia aleoko ny tontonana IPS.
Huawei Mate 8, fahaleovan-tena tsy mbola nisy toa azy
Ny bateria dia matetika no tanjaka lehibe ho an'ny fianakavian'i Mate ary raha misy ilay mpikambana vaovao ao amin'ny tsipika phablet an'i Huawei dia tsy ho afa-maina izy io. Amin'ny taratasy no ahitantsika a Bateria 4.000 mAh izay, miaraka amin'ireo pikselan'ny efijery ary ny fitaovan'ny Kirin 950, dia mampanantena fahombiazana sy fahaleovan-tena tena tsara. Ary izany no izy.
Tsy handiso fanantenana anao mihitsy ny fizakantena. Na dia marina aza fa tsy azo esorina izy, dia tsy mila miahiahy momba ny fitondrana banky herinaratra miaraka aminao. Ary izany ve aorian'ny andro iray nampiasana dia nanana bateria antsasaky ny Huawei Mate 8 miandry ho lany. Miresaka fampiasa mahazatra izahay.
Notsindriako mafy araka ny tokony ho izy ny bateria tokony ho adiny roa isan'andro sy ny Huawei Mate 8
Nijanona nandritra ny iray andro sy sasany aho. Mampiaiky. Ny ankamaroan'ny trosa dia azy Android 6.0 sy Emotion UI 4.0, miaraka amina fihetsika amponga tena feno.
Milaza aminao ny rafitra izay fampiharana mampiasa fahatsiarovana bebe kokoa noho ny kaonty, manolo-kevitra ny hanakatonana azy ireo hanitatra ny fizakan-tena, hahazoana fanatsarana loharano tena tsara. Raha ampiarahintsika amin'izany ny rafi-pandefasana haingana azy mamela anao handoa 37% ny terminal amin'ny 30 minitra ary fiampangana feno ao anatin'ny adiny iray sy sasany dia manana eo alohanay ny iray amin'ireo telefaona manana ny fahaleovan-tena tsara indrindra eny an-tsena. 10 ho an'i Huawei amin'ity lafiny ity.
La Fakantsary Huawei Mate 8 tsy ratsy mihintsy. Ny masom-bolany lehibe noforonin'ny sensor Sony IMX298 16 megapixel miaraka amin'ny fanamafisana ny optika, ny fifantohana amin'ny fizahana ny dingana ary ny flash taratra LED taratra dia manome fahombiazana tena tsara.
Ny sensor dia miasa tsara amin'ny setup pixel Bayer RGBG izay mahatonga azy hanao tsara amin'ny karazana scenario rehetra. ny 27 milimetatra misy aperture f / 2.0 manolotra fisamborana tena tsara na dia eo amin'ny tontolo mazàna be aza.
Raha vantany vao maty ny herinaratra dia milatsaka kely kokoa ny kalitaon'ireo sary raha oharina amin'ireo fakan-tsary hafa toa an'i Samsung na Apple, na dia tsy maintsy tadidintsika aza ny vidin'ny fihetsika izay ihetsehan'ny Huawei Mate 8.
Na ahoana na ahoana, ny sary nalaina, araka ny hitanao, dia tena tsara ary ny fahatsoran'ny rindrambaiko dia ahafahantsika maka sary mora sy tsotra. Moa ve ianao tia sary sy mifehy ny lafiny rehetra amin'izany? tsara miaraka aminy maody matihanina, Azonao atao ny mikitika ny soatoavina rehetra toy ny ISO na ny fivoahana, dia ho faly ianao toy ny ankizy maka sary.
Ny fizarana horonan-tsary dia teboka malemy iray hafa taorian'ny Hu Mate Mate 8 dia mamela anao hanoratra 1080p betsaka indrindra amin'ny sary 60 isan-tsegondra (47MBps), lavitra ny 4K natolotry ny maodely hafa. Raha izaho manokana dia tsy hanararaotra ireo horonantsary 4K mandritra ny taona maro aho, fa ho an'ireo mpampiasa izay mampiasa ity teknolojia ity dia antsipiriany iray tokony horaisina.
Farany, ny Fakan-tsary mialoha 8 megapixel Izy io dia manana sensor Sony IMX179 izay hahafaly ireo tia selfie sy antso an-tsary, manao sary an-tsarimihetsika, raha mbola any amin'ny faritra mamiratra isika.
Sary ohatra nalaina niaraka tamin'ny Huawei Mate 8
Huawei dia nanao a asa tena tsara miaraka amin'ny Huawei Mate 8, telefaona iray izay mety ho hitanao eo ambanin'ny 550 euro ary miaraka amina endri-javatra, famaranana ary fizakan-tena izay tsy handiso fanantenana anao.
Ny mpanamboatra Aziatika dia nanaporofo nandritra ny taona vitsivitsy fa afaka miatrika ny lanja lehibe ifanatrehana ity sehatra ity ary ohatra iray vaovao amin'izany ity telefaona ity. Huawei ve no tompon'ny tsena telephony manaraka? raha manohy amin'ity taham-pahalalana ity izy ireo, ary efa nolazaiko taminao fa ny Hanaitra anao ny fanadihadiana Huawei P9, Efa tsinjoviko fa hanome be horesahina i Huawei.
Ny fitadiavanao phablet matanjaka ahafahanao mankafy atiny multimedia amin'ny vidiny mirary, Ny Huawei Mate 8 dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra hodinihina.
Mahagaga ny famaranana premium an'ny telefaona
Tsy manam-paharoa ny fizakantenany: roa andro tsy misy olana maro
Ny phablet avo lenta farany tsara amin'ny resaka sandan'ny vola
Somary ara-drariny ihany ny efijery raha ampitahaintsika amin'ireo takelaka QHD hafa
Galerie sary an'ny Huawei Mate 8
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Huawei Mate 8, fanadihadiana sy hevitra
Ny kalitao / ny vidiny dia mihoatra lavitra ny Xiaomi Redmi Note 3 Pro…. Sarobidy ny antsasany ary tsy tokony hitsiriritra; tsy misy bateria, tsy misy kalitaon'ny efijery, tsy misy mpamaky ny rantsan-tànana, ... ho eo ny fakan-tsary, ary ny sd 650 dia biby (an'ny faritra afovoany ambony). Ankoatr'izay, ny sosona Miui dia mihoatra ny Android madio (na dia tonga aza ny vady. miaraka amin'ny 6.0)…. Ny zavatra tokana mihoatra ny Redmi dia ao anatin'ny famaranana, fa tsy amin'ny betsaka. Ny Redmi dia misy any Espana mandritra ny 250 e miaraka amin'ny antoka Espaniôla.
Ny Phabet tsara indrindra dia ny RMN 3 Pro, farafaharatsiny amin'ny kalitao / vidiny.
Lafo ity terminal ity.
Samsung Galaxy Note 6 dia havoaka amin'ny tapaky ny volana aogositra
Sintomy ary apetraho ny fampiharana WhatsApp vaovao ho an'ny Windows sy MAC. Tena mendrika izany ve?